ငါးလိပ်ကျောက်တကောင် ဖမ်းမိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ငါးလိပ်ကျောက်တကောင် ဖမ်းမိ
Posted by etone on May 17, 2011 in News | 15 comments
ဒီနေ့မနက် …ငါးနာရီ လေးဆယ်လောက်အချိန် … မနက်အိပ်ကောင်းတုန်းရှိသေးတယ် … ဆူဆူညံညံအသံကြောင့် နိုးသွားရပါတယ်… ။ နဂိုကတည်းက စပ်စုတတ်သူမို့ … ၀ရံတာထွက်ကာ ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်တော့…လူတွေ တစ်စုံတစ်ခုကို အားပြုကာ သယ်နေကြတယ်… ဒိုင်နာကားပေါ်ကို တွန်းတင်နေကြပါတယ်… ။
အိပ်ချင်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံကို ပွတ်သပ်ရင်း စပ်စုစိတ်က ထိန်းမရတော့… သူတို့ဘာကိုမပြီး ကားပေါ်တင်နေသလဲ ကြည့်တာ…အားပါးပါး… နည်းတဲ့ ငါးကြီးမဟုတ်ဘူး… ။ ကိုယ်တိုင် မမြင်ရလျှင်တောင် ဒီလောက်ကြီးတဲ့ငါး ဒီကမ်းနားမှာ ဖမ်းမိတာ ယုံမှာ မဟုတ်ဘူး… ဗျက်ကိုက ငါးပေခြောက်ပေလောက်ရှိမယ် … အရှည်ကတော့ ခုနှစ်ပေ ၊ ရှစ်ပေလောက်ရှိမယ် ထင်တယ်… ဝေးနေတော့ မှန်းကြည့်တာ …။စံပြငါးဈေးနားကနေ သယ်လာတာတွေ့တာပါ… လူတွေ အများကြီးဝိုင်းမတာတောင် မနည်းမရတယ်… ။ ကိုယ်လုံးကလည်း ချွဲကျိနေတော့ မရခက်တာပေါ့ … ။
ငါးလိတ်ကျောက်ဆိုတဲ့ငါးက သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲလေ… အတော် အဖိုးတန်တာကိုး… အရေခွံကနေ အရိုးထိ အသုံးတည့်တယ်လေ… ဒီတော့လည်း …ငါးဖမ်းလုပ်သားတွေ အတင်းကာရော ၀ိုင်းဖမ်းကြတယ်ထင်ပါရဲ့… ကားကလည်း သူ့ရဲ့ ဗျက်နဲ့ ယှဉ် လျှင် သေးတဲ့အခါ… သနားစရာ ငါးလေးခမျာ တွန့်ခေါက်စွာနဲ့ ပါသွားရလေရဲ့… ။ ကျမထင်ပါတယ်… အရှင်မိပြီးမှ သေသွားတယ်လို့ … ။ ငါးက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးရှိတုန်းမို့ပါ… ။ ငါးလိတ်ကျောက် သားရေနဲ့ လုပ်တဲ့ အိပ်တွေ ၊ဖိနပ်တွေဆို ဈေးက ကြီးမှကြီးပဲ… ။ လူတွေများ အရှင်ဖမ်းပြီး ပြတိုက်ပို့လျှင်တောင် နောက်ပိုင်း ဒီလို ငါးမျိုးဆက်တွေ ကျန်ဦးမယ်… အခုတော့… သူ့ခမျာ ရှော ရှာပြီ ထင်ပါရဲ့… ။ မလှုပ်နိုင်တော့ပါဘူး … ။
ငါးကြီးခမျာ …မျက်စိလည်ပြီး မြစ်ထဲရောက်လာကာမှ အသက်ထွက်ရရှာတယ်… ။ အောက်ဆင်း ဓါတ်ပုံရိုက်ရအောင် night dress နဲ့ မျက်နှာ မသစ်ရသေးတာ မို့ … အဝေးကနေ လှမ်းရိုက်လိုက်ရတာ …ဒီလောက်ပဲ ရတော့တယ်
nightdress နဲ့ ဆင်းရိုက်လိုက်ပေါ့။
အဲ့ဒီနားက ငါးသယ်တဲ့လူတွေ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး … လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်ထားလျှင်တောင် အစိမ်းလိုက်ကိုက်စားမဲ့ မျက်လုံးနဲ့ လိုက်ကြည့်တာ… ။
ငါးးးးဆိုတဲ့ကုန်စည်ကလည်း အစိမ်းတိုင်းကြီး ဆိုတော့
လူစီးကားကို ငါးအစိမ်းလိုက် အကောင်အကြီးကြီးတင်တယ်ဆိုတော့
ငါးကြီးကို ဘယ်ကိုယူသွားပြီး ဘာလုပ်မှာပါလိမ့်။ ကျွမ်းကျင်သူမရှိရင် လိပ်ကျောက်ခွံလည်း ရဖို့မလွယ်။ လိပ်ကျောက်သားလည်း ကောင်းဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒါမျိုးတွေက ပင်လယ်သားတွေမှ ကျွမ်းကြတာ။
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဈေးကမသေးဘူး ယောကျာ်းကိုင်သေးသေးလေးကို ၂ သိန်းလောက်ရှိတယ် … မိန်းမကိုင်အိတ်က ၅ သိန်းကျော် ၆ သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ် … စိန်ဂေဟာမှာတွေ့ဖူးတယ် ..
မြန်မာပြည်က လိပ်ကျောက်ခွံတွေကို တရုပ်ပြည်ဘက်က ဈေးကောင်းပေးဝယ်တယ်လေ၊ သူတို့မ၀ယ်ခင်ကဆိုလွှင့်ပစ်ရတာ။ အခုတော့ရွှေဖြစ်နေပြီ။
ငလိပ်ကျောက် သားရေး ဆိုပြီး ရောင်းနေတဲ့ ဟာတွေ တော်တော် များများက အတု ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ မိချောင်း သားရေ ဆိုပြီး ရောင်းနေတာ နေရာတော်တော် များများမှာ တွေ့တယ်။ ဈေးတွေက မေးလိုက်ရင် လန်ပြန်နေတာပဲ.. မတန်တစေး သွားစစ်လိုက်ရင်လည်း ပေးတယ်။ အဲဒီ ကတည်းက သဘောပေါက်တယ်။ အတုတွေ နဲ့ လုပ်စားကြတာ။
ငလိပ်ကျောက် ဆိုတာကြီးကို စလုံးက ရေကမ္ဘာမှာ တွေ့တယ် သွားပုံ လာပုံကို ရေအောက်ထဲက နေမော့ကြည့်တာ တော်တော် လှတယ်။ အဲဒီ အကောင်တွေက သန်ကြတယ်။ ဖမ်းနိုင်တယ် ဆိုတာ တော်လွန်းတဲ့ လုပ်သားတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ငလိပ်ကျောက်သား ရခိုင် သွားတုန်းက စားဖူးတယ်။ အသားက မာမာ လေး စားဖိုမှုးက ဟင်းချက်ကောင်းတော့ ငါးတန် သားလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဘာသားလဲ မေးတာ မပြောဘူး နောက် စားပြီးမှ သူက ပြောတယ် ငလိပ်ကျောက်တဲ့။
တော်တော်ကြီးတဲ့လိပ်ကျောက်ပဲ၊ လိပ်ကျောက်သားကိုမီးဖုတ်စားရင် အရသာသိပ်မရှိပေမဲ့ လိပ်ကျောက်ရဲ့ရေယက်လေးတွေက ထုတ်ထုတ် ထုတ်ထုတ်နဲ့ကိုက်လို့ကောင်းတယ်၊ ငခြောက်ထောင်းကျော်လိုလုပ်စားလဲ ကောင်းတယ်။
ဒီလိပ်ကျောက်ဟာ သာမန်ပါပဲ။ ကြီးတယ်လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။ တစ်ခါတုန်းက တွေ့ဖူးတဲ့ လိပ်ကျောက်မကြီးဗိုက်ထဲက ထုတ်လာတဲ့ (မမွေးသေးတဲ့) လိပ်ကျောက်က အဝိုင်းက တစ်ထွာသာသာရှိပြီး အမြီးက ၄ပေလောက်ရှိတယ်။
အရင်ကတော့ဈေးအပေါဆုံးပဲ ငွေဆောင်သွားတုံးက အနီးနားကရွာထဲသွားပြီ လက်ဆောင်ပေးဖို့ များများရမဲ့ငါးခြောက်ဝယ်တာ အဲဒီငါးခြောက်ကို ၀ယ်မိလာတယ် ဆွေမျိုးတွေ လိုက်ဝေတာ မျက်နှာမရပဲ အဆူခံတယ်..:) အ၇င်က အဖိုးမတန်တဲ့အခွံက အခုတော့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲ..ငါးလိပ်ကျောက် အသားက မစားတဲ့သူများတယ် ..တွင်းအောင်းသားစရင်းထဲမှာပါတယ်. အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ မတည့်ဘူးလို့ပြောကြတယ်……………..
ပင်လယ်ထဲက ဖမ်းလာတာနေမှာပါ။ စံပြငါးဈေးမှာလာရောင်းတာပေါ့ အီးတုံးရယ်။
အီးတုံး ပိစိ ကို ဘယ်လိုဝတ်ထားမှန်း လူတွေက ဘယ်သတိထားမိပါ့မလဲ။
အာ ဦးလေးကလည်း …စံပြငါးဈေးကိုလာရောင်းတာ မဟုတ်ဘူး … ။ ဆိပ်ကမ်းက သယ်လာတာ… ဘယ်ယူသွားလဲတော့ မသိဘူး …။ မိလာတာတော့ ပင်လယ်ဘက်က ထင်တာပါပဲ… ပြီးတော့မှ ဒီဆိပ်ကမ်းကို သယ်လာတာဖြစ်မယ်…။ အဲ့ဒီလောက်ကြီးတာ ကြီး တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး …။
etone က ပိစိလို့ ဘယ်သူပြောလဲ …. ကြီးပါတယ်… မြင်ဖူးတဲ့လူတွေကို မေးကြည့်… ။
ငါးလိပ်ကျောက် အခြောက်လှန်းပြီး မီးဖုတ်စား.. တကယ်ကောင်းတာ
ငါးသိပ်မကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် ကြိုက်တယ်။ တစ်ချို့တလေနဲ့
တော့ သွေးမတည့်တာ ဓာတ်မတည့်တာတော့ ရှိကောင်းရှိမယ်။